I-Sonic Robo Blast 2, umdlalo we-Sonic-themed kart racing game | Ubunlog
I-Sonic Robo Blast 2, umdlalo we-Sonic we-kart racing game
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Sonic Robo Blast 2 Kart (ihlala ifinyezwe njenge-SRB2Kart okanye i-SRB2K). Yi le Umdlalo wokubaleka wekart kunye nabalinganiswa bakaSonic, izinto kunye nomkhondo wendlela. I-SRB2Kart ineemephu ezingaphezu kwe-100 zeendlela ezimbini zomdlalo: eyona ndlela iphambili yohlanga kunye nemowudi yedabi apho abadlali balwa bodwa besebenzisa izinto ezikhoyo.
Esi sisimahla kunye nomthombo ovulekileyo wemidlalo yokubaleka yekart yeGnu / Linux, Windows kunye neMacOS. Umdlalo womdlali omnye unokudlalwa njengeXesha lokuHamba kunye nemowudi yabadlali abaninzi kunye nabadlali basekhaya nabakwi-Intanethi ngeLAN okanye nge-Intanethi. Ixhasa ukuya kuthi ga kubadlali abali-16 kumdlalo wabadlali abaninzi kwi-Intanethi.
I-Sonic Robo Blast 2 Kart lutshintsho lwekhowudi yemvelaphi yenguqulo 2.1 eyenziwe nguKart Krew. Imvelaphi isekwe kwimowudi ye-SRB2 Rider 'kaMario Kart.. Lo ibiyimidlalo yomdyarho wekart kunye nabalinganiswa, izinto, kunye neemephu ezivela kuSonic nakwi-SEGA.
1 Faka i-Sonic Robo Blast 2 Kart kwi-Ubuntu
2 Ukujonga ngokukhawuleza kumdlalo
Faka i-Sonic Robo Blast 2 Kart kwi-Ubuntu
Umdlalo wokubaleka I-Sonic Robo Blast 2 Kart iyafumaneka njengesixa flatpak Ubuntu. Ke ngoko, kufuneka kuqala sibe nale teknoloji inikwe amandla kwinkqubo yethu. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04, unokujonga Isikhokelo ukuba ugxa wakhe wabhala ngayo kule bhlogi kwithuba elidlulileyo.
Nje ukuba sibe nokufumana ithuba lokufaka iiphakheji zeplppak ku-Ubuntu 20.04, kuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye sebenzisa le Sonic Robo Blast 2 Kart racing racing ukufaka umyalelo:
Lo myalelo uza kufaka ingxelo yokugqibela yeSonic Robo Blast 2 Kart yomdlalo wokubaleka ku-Ubuntu. Inga sebenzisa lo mdlalo wokubaleka wekart Ngokusebenzisa isindululi oza kusifumana kwinkqubo, okanye ngokwenza kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) umyalelo:
Lo mdlalo ngumdlalo oqhelekileyo wokubaleka. Kubandakanya ukubanakho ukukhukuliseka, izinto zokunceda okanye zokuthintela umdlali, kunye nezinye izinto ezininzi ezisisiseko ezinxulumene nohlobo olo. Nangona kunjalo, ulawulo lwayo kunye nefiziksi zahlukile kwezinye imidlalo yekart, kugxilwe kwisantya kunye nezakhono zomdlali ngamnye. Iimpawu ze-SRB2Kart ziimpawu ezi-5 ezikhoyo kumdlalo osisiseko, kunye nama-30 nangama-bonuschars.
I-SRB2Kart yazisa ngoomatshini abathile kunye nobuchule, kubandakanya iTide Slip, iDrop Dash, kunye nokukwazi ukutsiba ngaphezulu kwamanzi kabini xa unamandla ngokwaneleyo. Ukongeza, izinto ezinokushiyeka ngasemva komdlali ziya kuhamba kancinci kunokuba umdlali ebaphosa ngaphambili, kunye nezinto ezithile (iibhanana okanye imigodi) ungarhuqwa emva komdlali njengesixhobo sokuzikhusela.
Umdlalo ubonelela ngemowudi yesilingo sexesha, apho umdlali akhuphisana ngokuchasene neziporho zabasebenzi kwaye afumane iimedali zokugqiba ikhosi ngamaxesha athile. Iimbasa zesilivere zinikezelwa ngokubetha elona xesha likhawulezileyo kutyelelo kwaye iimbasa zegolide zinikezelwa ngokubetha isiporho sabasebenzi. Ukufumana izixa ezithile zeembasa okanye ukudlala inani elithile leembaleki kuya kuvula umxholo owongezelelweyo, kubandakanya iikomityi ezongezelelweyo kunye nesantya sokubaleka esinzima.
Enye yeempawu eziphambili ze-SRB2Kart yindlela yabadlali abaninzi. Kwi Le midlalo ingadlalwa ngokungaxhunyiwe kwi-intanethi ngokudlala kwendawo kunye nabadlali abane. Ukongeza, sinokudlala kwi-Intanethi nge-LAN okanye kwi-Intanethi ngenkxaso ukuya kuthi ga kubadlali abali-16. Ukwahlula imo yesikrini ixhasa zombini iindlela ezikwi-intanethi nakwi-intanethi, ezinokudlala ukuya kuthi ga kubadlali abane kumthengi ngamnye. Ukuba iseva ekwi-intanethi ifuna iiplagi ezithile, umdlalo uya kuzikhuphela kwaye uzilayishe ngaphambi kokwamkela isicelo sokujoyina.
ukuba susa lo mdlalo kwi-UbuntuKuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye ubhale kuwo umyalelo
Ngolwazi oluthe kratya malunga nomdlalo, abasebenzisi banokuthatha jonga kwi iwebhusayithi yeprojekthi okanye yakhe wiki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » I-Sonic Robo Blast 2, umdlalo we-Sonic we-kart racing game
I-Linux 5.12-rc4 ifikile kwaye kubonakala ngathi yonke into isendleleni elungileyo